အကျဉ်းတန် မနက်ခင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » အကျဉ်းတန် မနက်ခင်း
Posted by etone on Aug 10, 2011 in Short Story | 22 comments
သက်ရောက်မှု့ တစ်ခုတိုင်းမှာ တုံ့ ပြန်မှု တစ်ခုခု ရှိစမြဲဆိုတာ … လက်ခံနိုင်ကြမယ်ဆို စွာတေး ဇတ်ဇတ်ကျဲ စာရင်းမှာ ကျွန်မပါမှာ မဟုတ်ဘူး ….. ။ တကယ်တမ်းတော့ ကျွန်မရဲ့ ကာရိုက်တာက … စိတ်ဆတ် ၊ ဒေါသထွက်လွယ်ပြီး စွာတဲ့လူမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ … သက်ရောက်လာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနေထား အပြုမူ အပြောဆိုတွေအောက် ပရုတ်လုံးလို ဖြစ်သွားခံရနိုင်တာမိုက …. မှန်လိုပဲ ကျင့်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားရင်း …. ကာရိုက်တာ ပြောင်းလာခဲ့တာပါ … ။ သက်ရောက်မှူ တစ်ခုအတွက် တုံ့ ပြန်မှူ တစ်ခု ပေးတဲ့အခါ တိုင်း ကျွန်မက လူကြမ်းကြီးပဲ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ … ။ အ ဆိုးမြင်ဝါဒီ လက်ကိုင်ထားပြီး ၊ ရမ်းကား တတ်သူ မဟုတ်ပါသော်လည်း … တစ်ခါတစ်ရံ တချို့ အဖြစ်ပျက်တွေက ကျွန်မကိုယ်ကို အကျဉ်းတန်ဒေါသကြီး ရမ်းကားတတ်သူအဖြစ် တွန်းပို့တယ်လေ …. ။ ဒီနေ့ မနက် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ … အဖြစ်ပျက်တစ်ခုကလည်း ကျွန်မအတွက် စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ယုံတင်မကပဲ … ကြမ်းတမ်းတဲ့ သွင်ပြင်ဖြစ်သွားစေခဲ့တယ် … ။
ဒီမနက် အိပ်ယာထတော့ … အရမ်းကို လန်းဆန်းနေပါတယ် … အရင်ညထက် ပိုပြီး အချိန်နာရီဝက်လောက်စော အိပ်ထားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်မယ် …. ။ အရာရာက ကြည်လင်နေလို့ …ရာသီဥတုလေးကလည်း … ခြောက်သွေ့ အေးချမ်းနေပါတယ် …. ။စိုစွတ်ပြီး မိုးကောင်းခဲ့တဲ့ … ဒီရက်ပိုင်းမှာ … ဒီမနက်ခင်းရာသီဥတုလေးက အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်တယ်လေ …. ။
လေပြေလေးက တဖြူးဖြူးနဲ့ .. ကိုယ့်ကိုယ်သင်းနံ့ကိုယ်ရှူမိရင်း …. လန်းဆန်းတတ်ကြွတဲ့ မနက်ခင်းလေး အစစအရာရာ သာယာနေတာမို့ …. ဘာမှန်းမသိကြည်နူးနေမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ …. ။ …. ရုံးသွားမဲ့လမ်းမှာ တယောက်တည်း … အေးအေးဆေးဆေး လမ်းလျှောက်နေတုန်း …. ကျွန်မနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ စက်ဘီးတစီး လမ်းကြောင်း ပြောင်းပြန်နင်းလာပါတယ် … အဝေးကြီးကတည်းက လမ်းကြော ပြောင်းပြန်နင်းလာတာမို့ .. ထင်သာ မြင်သာ ရှိလွန်းလှပါတယ် … ။ စက်ဘီးနောက်ဘက်မှာလည်း …ခြင်းတောင်း တတောင်းနဲ့ .. ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ တနင့်တပိုး ထည့်ထားပါတယ် … နင်းလာတာက အညာသားလိုလို ပုံမျိုးပါ … ကျွန်မထက် ရှစ်နှစ် ၊ ကိုးနှစ်လောက် အသက်ကြီးမယ် ထင်ပါရဲ့ … ။ လမ်းကြောပြောင်းပြန်နင်းလာပြီး … အရှိန်နည်းနည်း ပါတာမို့.. တဖြည်းဖြည်း ကျွန်မနဲ့ နီးလာတဲ့အခါ … တိုက်မိမှာ စိုးတာကြောင့် .. ကတ္တရာလမ်းဘေးကိုဆင်းပြီး ကျွန်မလမ်းဆက်လျှောက်ပါတယ် … ။ တစစ နီးကပ်လာချိန်မှာ … အဲ့ဒီအ ညာသားကလည်း .. ကတ္တရာလမ်းပေါ်က ဆင်းပြီး .. ကျွန်မလမ်းလျှောက်တဲ့ …. ဘေးမြေသားတည့်တည့်ကနေ စက်ဘီးနင်းလာတယ် … ။ သူ မြေသားပေါ် ဆင်းနင်းတော့ .. ကျွန်မက ကတ္တရာလမ်းပေါ် ပြန်တက်လျှောက်တာပေါ့ … ။ စက်ဘီးနင်းသူက အရှိန်လျှော့ပြီး .. ကျွန်မကတ္တရာလမ်းပေါ် လျှောက်တဲ့ရှေ့တည့်တည့်ရောက်အောင် နင်းပါတော့တယ် …. ။ စက်ဘီးနင်းသူ မူမမှန်တာမှန်း ကျွန်မသိသွားတော့ … ကတ္တရာလမ်းပေါ် တည့်တည့်နင်းလာတာ မြင်လျှက်နဲ့ … လမ်းလည်း ဆက်မလျှောက်တော့ပဲ … တည့်တည့်အနေထားနဲ့ … ဒီအတိုင်း မတ်တပ်ရပ်နေလိုက်တယ် … ။ ရုံးသွားတဲ့လမ်းက ကုန်းလေးဖြစ်ပြီး … လူပြတ်ပေလို့သာပါပဲ ..မဟုတ်လျှင် ကျွန်မရဲ့ …ထုပ်ဆီးတိုးနေတဲ့ အဖြစ်ကိုမြင်ရလျှင် … အူတတ်မတတ်ရယ်စရာကောင်းနေပါလိမ့်မယ် … ဒါက ဘေးလူတယောက်ရဲ့ .. အမြင်မှာပေါ့ … ။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ … ဟိုရှောင် ဒီရှောင်လုပ်နေတာတောင် တည့်တည့် တိုးချင်တဲ့ လူ … သက်သက်ရန်စတာမို့ …. ကြည်လင်နေတဲ့ မနက်ခင်းလေး ဒေါသလှိုင်တွေ ထန်တော့မယ်ဆိုတာ အတပ်သိနေခဲ့ပါတယ် … ။
တိုက်တော့မည့်ဟန်နဲ့ …. စက်ဘီးတည့်တည့်ပဲ လာနေတဲ့အချိန် ကျွန်မကလည်း မြေသားလမ်းပေါ် ပြန်မဆင်းလျှောက်တော့ပဲ ကတ္တရာလမ်းပေါ် မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့အချိန် … နှစ်ဦးစလုံးဘယ်သူမှ လက်လျှော့မဲ့ဟန်မရှိတာ အသေချာပါပဲ … ။ စက်ဘီးကိုနင်းလာပြီး ကျွန်မနဲ့ ရှေ့ဘီး ထိခါနီး ဘရိတ်ဆောင့်အုတ်သံ ကြားလိုက်ရပါတယ် …… တစ်ထွာလောက်အလိုမှာ …ဘရိတ်မိသွားတာမို့ .. ကျွန်မကို မတိုက်မိခဲ့ပါဘူး … ။
မိန်းမတယောက်ကို အိနြေ္ဒပျက်သွားအောင် နှောက်ယှက်ချင်တဲ့ စိတ်က … မြို့သားလူတချိွု့မှာတင်မဟုတ်ပဲ ….. နယ်သား လူတချို့ဆီမှာပါ ရှိပါလားလို့ ….သိလိုက်ရတော့တယ် .. ။ ဒီမှာကတော့ … လူငယ်လေးတချို့သာ … စချင် နောက်ချင်စိတ်များကြတာပါ … အထူးသဖြင့် … ၀ိုင်းဖွဲ့ သီးချင်ဆို ၊ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်နေတဲ့အချိန် ….. ကောင်မလေးတယောက် မလုံတလုံ ၀တ်လာလျှင် … အော်ဟစ် စနောက်တာမျိုး တွေ့ဖူးခဲ့ပေမဲ့ … ဒီနေ့မနက် ကျွန်မသွင်ပြင်က … လျှပ်ပေါ် လှော်လီတဲ့ သွင်ပြင်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး … ။ ကြပ်ထုတ်နေတဲ့ ကောက်ညှင်းထုတ်အ၀တ်စားမျိုးလည်း မ၀တ်ဆင်ခဲ့ … ပါးလှပ်နေတဲ့ မှန်ဇာလို အသားမျိုးလည်း မ၀တ်ဆင်ခဲ့ပါပဲ နဲ့ … ရုံးယူနီဖောင်းကိုပဲ ၀တ်စုံပြည့် ၀တ်ဆင်ခဲ့တာပါ … ။မြန်မာ အကျီ င်္ နဲ့ … ထမိန် ဆင်ထားတဲ့ ရုံးယူနီဖောင်းဝတ်တိုင်း …ရှိရင်းစွဲအသက်ထက် သုံးနှစ်လောက် ပိုရင့်သွားတယ်လို့တောင် အိမ်ကလူတွေ ပြောခဲ့ကြသေးတာ … ဒီလူဘာကိုကြည့်ပြီး စချင်နောက်ချင် ၊ နှောက်ယှက်ချင်စိတ်ဝင်မိပါသလဲ ။ မိန်းမတယောက်တည်း … အားနည်းတယ်ဆိုပြီး … ဒါသက်သက်ရန်စတာလို့ ကျွန်မထင်တယ်လေ … ။ သက်သက်အရှက်ရအောင် … စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်အောင် လုပ်တာမို့ … ကျွန်မသည်းခံနိုင်အောင် သဘောထား မပြည့်ဝပါဘူး … ။ မိန်းမတယောက်ကို ဒီလို လုပ်လို့ … ဘာမှ မဖြစ်မသွားဘူးဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ် …. ဒီလို အိညှက်ညှက် မိန်းမတွေကလည်း .. ကြိတ်သာ ငိုယုံ ၊ လမ်းသွားလမ်းလာတွေရှိလျှင် ရှက်ယုံကလွဲလို့ …ဘယ်လိုမှ တုံ့ပြန်မှူ မလုပ်နိုင်ဘူး အထင်နဲ့ … ကျွန်မကို ဒီလို လုပ်တာ ဖြစ်မှာပါ … ။
ကျွန်မရဲ့ … ကြည်နူးနေတဲ့စိတ်တွေ ကစဉ့်ကလျားဖြစ်ပြီး ….. ဒေါသအဖြစ်ပြောင်းသွားခဲ့ကာ … ဘရိတ်အုတ်ပြီး .. .ပြန်လှည့်ထွက်သွားမဲ့ စက်ဘီးနင်းသူကို ပြန်ပြောနိုင်ခဲ့တာ နှစ်ခွန်းတည်းပါ … ။ ” ခွေးမသား….. မျက်စိမပါဘူးလား …. ” လို့ မရည်ရွယ်ပဲ ပြောမိသွားတယ် … ။ စက်ဘီးနင်းသူကြားလိုက်မှာပါ …. သို့သော်… ကျွန်မကိုကျော်ပြီး … အရှိန်နဲ့ ဝေးရာ နင်းသွားခဲ့ပါပြီ … ။ သာယာနေတဲ့ မနက်ခင်းလေး…. အဓိပ္ပါယ်မဲ့သွားတော့ … စိတ်ထဲ တနှုံ့ နှုံ့ နဲ့ … ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းပြီး … လမ်းဆက်လျှောက်တုန်း … သုံးမိနစ်လောက်အကြာမှာ ကျွန်မနောက်ကျောဘက်ကနေ .. စက်ဘီးလိုလို .. ဆိုက်ကားလိုလိုက ဘရိတ်အုတ်သံကြားမိပြန်တယ် … ။
အသံလာရာက ကျွန်မနောက်ကျောဘက်ကမို့ …လှည့်မကြည့်ပဲ နှစ်လှမ်းလောက် ဆက်လျှောက် အပြီးမှာ .. …နောက်ကအသံတသံပေါ်လာပါတယ် … လှည့်မကြည့်ပေမဲ့… သူပြောတဲ့ အကြောင်းရာကို နားထောင်ပြီး ခုဏန ကျွန်မကို အိနြေ္ဒပျက်အောင် လုပ်ချင်တဲ့ ငနဲမှန်း သိလိုက်ပါတယ် … ။ ကျွန်မပြောလိုက်တဲ့ အပေါ် မကျေနပ်လို့ နောက်ကနေပြန်လာပြောတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် … သူပြောတာက … ” မိန်းမဖြစ်ပြီး ဆဲတယ်… အရှက်မရှိဘူး၊ မရှက်တတ်ဘူး … “တဲ့လေ … ။ ပွစိပွစိကို …နောက်နေကို စက်ဘီးတွန်းပြီး လိုက်ပြောတာပါ ..။
ကြားကြားချင်း ဒေါသတွေ ဆူပွက်လာတာမို့ … ကျွန်မဦးနှောက်ကတောင် စဉ်းစားချိန်မရပဲ … တုံ့ ပြန်လိုက်ခဲ့တယ်လေ … ။ ” စိတ်ဓါတ်နိမ့်ကျတဲ့ ကောင်ရဲ့ …. ရှက်ရအောင် ငါ့လမ်းငါသွားတာ နင့်ကို ဘာလုပ်လို့လဲ …. နင်သာ ရှက်တတ်ရင် လဲသေဖို့ကောင်းတာ … ရန်မစနဲ့ .. ပြသနာတက်သွားမယ် “လို့ … ပထမပြောခဲ့တဲ့ စကားထက် အသံနှစ်ဆတင်ပြီး နောက်လှည့်ပြောတဲ့အခါ သူက ပေစောင်းစောင်းကြည့်နေပါတယ် … ။ သူ့အကြည့်က အဓိပ္ပါယ် တမျိုးမျိုးပါနေပေမဲ့… ကျွန်မနားမလည်ပါဘူး .. ကျွန်မစိတ်ထင် …. negative ပါတဲ့ မဲ့ပြုံးမျိုးမို့ကျွန်မသူ့ကို ကျောခိုင်းတာနဲ့ … နောက်က စက်ဘီးနဲ့ ၀င်ဆောင့်မလား မတွေးတ်အောင်ပါပဲ … ။ … ကြည့်နေရင်းနဲ့ … ဒေါသဆတိုးလာတာကြောင့် …… ရိုက်ပစ်ဖို့… လမ်းဘေးက ဒုတ်ဖြစ်ဖြစ် ၊ အုတ်ခဲဖြစ်ဖြစ် ပတ်ရှာနေတုန်း … အခြေနေမဟန်မှန်း ရိတ်စားမိတဲ့ ငတိက စက်ဘီးနင်းပြီး တရှိန်ထိုး ပြေးသွားပါတော့တယ် … ။
အဲ့ဒီနေရာမှာ အူလည်လည်နဲ့ … ဒေါကီးပြီးကျန်ခဲ့တာ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းပါ … ။ ဒေါသထွက်လွန်းလို့ … အသားတွေတောင် တဆတ်ဆတ်တုန်တယ် … အဝေးက မြင်နိုင်တဲ့လူရှိလျှင် ကျွန်မပုံက လမ်းလည်ကောင်မှာ နတ်ပူးနေတာနဲ့ .. တူပါလိမ့်မယ် .. ။ … ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ထိန်းပြီး ခဏကြာတော့မှ … ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားနိုင်တော့တယ် … ။ ရှာရှားပါးပါး ကြည်လင်နေတဲ့ မနက်ခင်းလေး အကြောင်းမဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ခဲ့ရတော့တယ် … ။
သူ့အတွက်လည်း ဘာအကျိုးမှ မရှိဘူး … ကိုယ့်အတွက်လည်း ဘာအကျိုးမှမရှိဘူး …. နောက်ပြောင်း စော်ကားချင်ရုံနဲ့ … သူတပါးရဲ့ အချိန်တွေကို အနှောက်ယှက် ပေးတာ … စိတ်မှန်တဲ့လူတွေ လုပ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး … ။ ပခုံးနှစ်ဘက်ကြားခေါင်းပေါက်တာခြင်း အတူတူ ပုစွန်ဦးဏှောက်နဲ့ လူတွေလည်း ရှိသေးတာမို့ ….အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ ထပ်မဆုံရပါစေနဲ့လို့ပဲ … ဆုတောင်းမိပါရဲ့ ။ ကိုယ့်ရဲ့ အပြူမူ ၊ အပြောဆိုက ကိုယ့်အတွက်လည်း ကောင်းကျိုးမပြု ၊ သူတပါးအတွက်လည်း ဒုက္ခဖြစ်စေတယ် ၊ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုလျှင် … ဒီလိုမပြုလုပ်ကြဖို့…. တိုက်တွန်းချင်ပါတော့တယ် … ။ ။
အကျဉ်းတန် တော့ မဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော် ..
အကြည့်တန် လို့ ရေးရတယ် ထင်တယ် …
သတ်ပုံကျမ်းမှာတော့ အကျည်းတန် လို့ရေးထားတယ်
အဲလိုပဲ စက်ဘီးနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်လာပြီး တိုက်မလိုလုပ်တာ
မိန်းကလေးတွေတွေ့တိုင်း အဲလိုလိုက်ပြီး စိတ်ပုပ်နေတဲ့ကောင်တွေထင်တယ်
မetoneလို ကျွန်မလည်း ပေရပ်နေလိုက်တယ်
စိတ်ထဲကလည်း ကြိမ်းပြီးသား တိုက်ရဲတိုက်ကြည့်ပါလား
မိန်းမမြင်ရင်ပါးစပ်သရမ်းမယ် ရိသဲ့သဲ့လုပ်မယ် ကြောင်မယ်
အဲလို လူမျိုးတွေ သပ်သပ်ကိုယ်ရှိတာ etone ရေ
သူတို့က သူတို့အတွက် ခဏတာ စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ အရေး
သူတစ်ပါးကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးမယ် ပါးစပ်သရမ်းမယ်
နှမချင်းမစာမနာပြောမယ် ဒီလိုလူမျိုးတွေ အတွက် ကိုယ့်ရဲ့
ပျော်ရွှင်နေတဲ့ စိတ်ကိုပေးလိုက်ရတာ နှမြောစရာကိုကောင်းတယ် ……
ဒီလို နှမသားချင်းမစာနာတဲ့ လူမျိုးကို ကောင်းကောင်းပညာပေး ဆုံးမပေးသင့်တယ် …
တယောက်တည်း ဆိုပြီး နိုင်လိုမင်းထက် စနောက်ချင်တဲ့ သဘောထင်တယ်။ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတယ်နော်။ နောက်ဆို ညီမ ကို အဲဒီ တောသား ကွေ့ရှောင်သွားမယ်။ အိတ်ထဲမှာတော့ ဓါးမြှောင်လေးတော့ ဆောင်ထား အဖော်ရအောင်.. ဟိဟိ…
တချို့သူတွေ တကယ်မျက်နှာရူးတာ။ ဥပေက္ခာပြုလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
အီးတုန်းရေ.. မိုးတွင်းဆိုတော့ ထီးတော့ပါမှာပဲလေ
အဲလိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေကို မျက်နှာကို ထီးနဲ့ပိတ်ရိုက်ပြစ်ရတယ်.. စကားအရာက မထိရောက်ဘူး
မှတ်ထားပေါ့ကွာ.. တောကရယ်၊ မြို့ကရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး.. စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်.. ပျော့ရင်ဖယောင်း၊ မာရင်သံချောင်းပေါ့.. နောင်တစ်ခါ ထပ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ ဒီနေရာကနေပဲ လူမသိ သူမသိ အားပေးအားမြှောက် လုပ်လိုက်ရပါကြောင်း…
အဲတော့နောက်တစ်ခါဆို မဆဲနဲ့ ခဲနဲ့ကောက်ထု။
မိန်းမသားဖြစ်လို့ တစ်ကယ်တွေးကြည့်ရင် ပြန်လုပ်ရမှာလဲ ခက်ပါမယ်…
ဘယ်လို အကြံဥာဏ်ပေးရမလဲ တောင် မသိနိုင်တော့ပါဘူး…..
အဖေါ် ပါမယ်ဆိုရင် ပိုပီးသင့်တော်မယ် ထင်ပါတယ် မမ etone ရေ…
စက်ဘီးနဲ့လူက မိုက်တိမိုက်ကန်းဆိုရင် ခက်နေမလားလို့ပါ….
ကာယိနြေ္ဒ ပျက်ပြားစေခြင်း ကိစ္စ က ဒီလိုပါပဲ လောကကြီးမှာ ကိုယ့်ကို ပြန်မပြောနိုင်ဘူးလို့ ထင်နေတဲ့ လူတိုင်းက တဖက်သားကို အမြဲလိုလို ကျူးလွန်ကြတယ် ..
ကျားက မကို၊ မ က ကျားကို၊ ကျား ကျားချင်း၊ မ မချင်း။ ကလေးက လူကြီးကို၊ လူကြီးက ကလေးကို၊
တခါတလေ အမျိုးထဲမှာတောင်မှ ဖြစ်ကြတယ်
ကာယကံမြောက် ကျူးလွန်တာ၊ ၀စီကံလောက်နဲ့ ကျူးလွန်တာ
(မနောကံနဲ့ ကျူးလွန်တာ ကျတော့ လူမသိဘူးပေါ့ .. ဒါကြောင့် လူရွှင်တော် မော့စ် က
ပရိသတ်အားလုံးကို ပတ်ပြီး လက်အုပ်ချီတဲ့ ပြက်လုံးကို မှတ်မိကြမှာပေါ့)
ယောက်ျားတွေရော မခံရဘူးလားလို့ မေးရင် ..
မိန်းကလေး အများစုရှိတဲ့ အရပ်မှာ အနည်းစုဖြစ်တဲ့ ယောက်ျားတွေလဲ ဒီလို အဖြစ်မျိုး ကြုံရတတ်ပါတယ်
အချို့က အမှတ်မဲ့ လုပ်ကြတယ် .. အချို့က ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ လုပ်ကြတယ်
တုန့်ပြန်ဖို့ကျပြန်တော့ အခြေအနေ .. အချိန်အခါ ကိုလိုက်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ် တုန့်ပြန်ဖို့ လိုလိမ့်မယ်
တခါတခါ မခံချင်စိတ်လေးနဲ့ တုန့်ပြန်လိုက်ကာမှ အုပ်စုဖွဲ့ ကျူးလွန်တဲ့ လူနဲ့ တွေ့ရင် အခက်အခဲတွေ တွေ့ရတတ်တယ် .. အထူးသဖြင့် မိန်းမသားတွေအတွက်
ဒေါက်တာရေ …ကျွန်မလည်း စိတ်ကောင်းလေး ၀င်ပြီး ဟိုရှောင် ဒီရှောင် လုပ်ပေးပါသေးတယ် …. ။ ရှောင်လေ တည့်တည့် တိုးချင်လေမို့ … ဒေါသက ထွက်မိသွားတာ ….။ ပြောခံရတော့ အကျေမချမ်း …ဖြစ်ပြီးနောက်က ပြန်လိုက်ပြေတာ…. ။ လိုက်သာပြောတာ… နည်းနည်းကျွတ်တဲ့ကောင်မို့လို့ …. ပေပေတေတေသာဆို … အဲ့ဒီနေရာ ပွဲကြီးပွဲကောင်းပဲ … ။
ဒေါသထွက်တဲ့ အချိန် ယောကျာင်္းတွေ မိန်းမတွေ မြင်မှာတော့ မဟုတ်ပဲ … ဗျင်းထည့်လိုက်မှာ ။ ဆေးရုံဆေးခန်းနဲ့ …. ရဲစခန်းလောက်တော့ ရောက်လိမ့်မယ် ထင်ပါရဲ့ … ။
အမေက ဆုံးမတာ ….သူများကို မတရားလည်း မလုပ်ချင်နဲ့ …ကိုယ့်ကိုယ်မတရားလာလုပ်လည်း ခံမလာနဲ့တဲ့လေ …. ။ မတရားမှူတခုအတွက် တုံ့ ပြန်ခဲ့လို့ တစုံတရာဖြစ်မယ်ဆိုလျှင် … သူလိုက်ရှင်းမယ်တဲ့လေ… ။
etone ရေ- တမင်သက်သက် သူတပါးကို လိုက်နှောင့်ယှက်တယ်ဆိုထဲက အဲဒီလူရဲ့ အဆင့်အတန်းက နိမ့်ကျလှပါတယ်။ မတူရင်မတုနဲ့ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း သူတို့ကို တတ်နိုင်သလောက် ပညာရှိနည်းနဲ့ ရှောင်နိုင်ရင် ကောင်းတာပေ့ါ။ မရှောင်နိုင်လဲ သွားမယှဉ်တာ ကောင်းတယ်။ တခါတလေတွေ့ရတဲ့လူဆို အရေးမကြီးဘူး။ အဲဒီနားမှာနေတဲ့လူဆို နောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ရင် ပိုခက်နေမယ်။ အဖော်နဲ့သွားရင်လဲ နည်းနည်းတော့ အန္တရာယ်ကင်းနိုင်ပေမယ့် အကောင်းဆုံးကတော့ ဖယ်ရီမှီအောင် စောစောထ။ အိပ်ပုပ်မကြီးနဲ့။
မြန်မာပြည်မှာ.. အပေါ်က စတော့ကင်း…ဥပဒေမျိုးကို သေသေချာချာ.. လုပ်သင့်တယ်..။
အရေးလည်းယူသင့်တယ်..။ လွှတ်တော်ထဲက …လောမိတ်ကာ(အမတ်)တွေ… သိကြစေချင်ကြောင်း…။
For many years, stalkers were able to get away with harassing innocent victims. There were few laws to protect the innocent. And the laws that were available were highly ineffective. It got so that stalkers thought they were immune from prosecution. There were no stalker laws and harassment laws requiredahuge burden of proof and the ability to demonstrateapattern of harassing behavior.
However, the laws have been changed. In most states,astalker can now receive several years in prison for the FIRST OFFENSE. The victim no longer needs to showapattern. There do not have to be multiple incidents. Instead, where the burden of proof used to lay with the victim, now the courts are handing out sentences to first time stalkers.
NEW STALKER LAWS state that it takes only one incident where it can be shown there was an intent to harass or otherwise stalk to getaconviction. What this means to you is, if someone stalks you, and you get the police involved, that person can be put in prison for the very first offense.
ONLINE STALKERS CAN BE PUT IN JAIL
I have been researching heavily, and have found that indeed, the law does not differentiate between offline stalking and online stalking. If someone usesacomputer to stalk you it is no different from if they were doing it by phone or in person. THEY CAN BE PUT IN PRISON!
Do not threaten to have the stalker arrested. Don’t even let them know the police have been contacted. They might slow down forawhile, but they will return, and the next time they will be more careful making it harder for the police to catch them. You should notify the police the very first time someone threatens to stalk you. You should follow up with the police each time they harass you. Once the police catch the stalker you should PRESS CHARGES (Never let the stalker talk you out of pressing charges – don’t believe their false promises to stop). In court, you should go in front of the judge and ask for the maximum punishment available by law.
ဒီလို နှမသားချင်းမစာနာတဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးတွေကို ကောင်းကောင်းပညာပေးပြီး ဆုံးမသင့်တယ်။
သူတို့က မိန်းကလေး တစ်ယောက်တည်းလည်းဖြစ်တယ် ပြန်လဲမပြောရဲ တစ်ခုခုလဲ ပြန်မလုပ်လောက်ဘူးလို့ တွက်ပြီး အဲ့လိုတွေလုပ်တာ …… etone နဲ့လဲတွေ့ရော ပြေးရော။ ကောင်းတယ် etone ရေ အဲ့လိုမဟုတ်မခံ ဆတ်ဆတ်ကြဲ စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတာ …
နီ နာ့ကို လာညှောက်ပေးနေတာ ယား … ။ နဂိုကတည်းမှ … တထုထုဆို … ဗျင်းလိုက်မယ်ချည်း ချိတ်က မှတ်နေဒါ … တီကယ် ယုံးယောက် ဂတ်ယောက်ရှို …. နီညှောက်ပေးယို့ … ရုတ်ရတာဘာလို့ ကြောယိုက်မယ် … တိယား
ဒါပေမယ့် တဖက်ကအငြိုးနဲ့ နောက်ပိုင်းကိုယ့်ကို လိုက်ဒုက္ခပေးနေမှာလဲ စိုးရတယ်
အင်းးးး ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော် …….. မဆွိဆိုရင်ပါးစပ်နဲ့လက်နဲ့ မပြောရဲဘူး အဲဒီလိုလူတွေက အဲလိုပြန်ပြောရင် ပိုပြီးရိုင်းလာနိူင်တယ်လေ။ သူတို့ကိုယ် သူတို့ရှက်သွားအောင် မျက်လုံးနဲ့ နာအောင်ကြည့်ပေးလိုက်တယ် တော်တော်အောက်တန်းကျပါလားဆိုတဲ့ အကြည့်မျိုးကို ကြည့်ပေးလိုက်တာပဲ